हल्लै बढी - मनोरञ्जन - नेपाल
अभिनेता हुनुको नाताले अनमोल केसीको अभिनयको अधिक चर्चा हुनुपर्ने हो । यथार्थ अलिक भिन्न छ । उनको कामभन्दा उनले लिने दामको धेरै चर्चा चल्छ । जस्तो : कृमा उनको भूमिका कस्तो छ ? वास्तै छैन । जबकि, उनले यस फिल्मबाट सुरुमा २० लाख र सुटिङ लम्बिएपछि थप १० लाख रुपियाँ लिएपछि सिनेवृत्त तात्यो । त्यसपछि कुनै फिल्ममा अनुबन्ध नभएका अनमोल फेरि पारिश्रमिककै कारण आकर्षणको केन्द्रमा छन् । उनलाई ५० लाख रूपियाँसम्मको प्रस्ताव आएको खबर बाहिरिएको छ । भलै, अनमोलका बुबा भुवन केसीले जानाजानी हल्ला चलाएको आरोप लगाउँछन् कतिपय। सबैले स्वीकार्ने तथ्य यतिबेलाका सर्वाधिक महँगा हिरोचाहिँ नि:सन्देह अनमोल नै हुन् । तर, कामभन्दा बढी हल्ला भएपछि दर्शकले हल्का रुपमा लिन्छन् भन्ने हेक्का उनलाई होला/नहोला ?
प्रकाशित: मंसिर १७, २०७४